April 2014 ~ Myanmar Cute Gay Boy (MCGB)
This is the best gay website for Myanmar gay peoples.
On 7:12 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay love story6comments
ကျောင်းနာရီစဉ်မှနာရီအချက်ပေးသံသည် အနီးတစ်ဝိုက်သို့ ပြန့်လွင့်လျက်ရှိသည်။ ထို့အတူကျောင်းဝန်းထဲရှိ ပင်စည်ကြီးကြီးအရပ်ရှည်ရှည် ယူကလစ်ပင်များကလည်း ဟိုသည်လှုပ်ခတ်ယိမ်းထိုးနေကြသည်။ ကျောင်းပရဝဏ်အတွင်း လွယ်အိတ်ကိုယ်စီဖြင့်သွားလာနေသော ကျောင်းသားလေးများကလည်း အစီအရီပါပင်။ သိပ်မကြာမီထိုကျောင်းနားသို့ Toyota Surf ကားတစ်စီးမောင်းနှင်လာသည်။ ထို့နောက် တဖြေးဖြေးကျောင်းဝန်းတံခါးမကြီးနားသို့ ဆက်လက်မောင်းနှင် သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျောင်းဝန်းအဝင်ပေါက်နားသို့ရောက်သောအခါ ဒေါ်မီမီမိုးစက်မှ ကားကိုစက်သတ်လိုက်ကာ ရပ်နားလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကားသော့ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး Safety Belt ကိုပါခါးမှချွတ်လိုက်၏။
သူမကပြောပြီးသည်နှင့် ကားပေါ်မှတံခါးဖွင့်ပြီးအောက်သို့ဆင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကားအနောက်ခန်းရှိ သူမသားထံသို့သွားလိုက်ပြီး ကားတံခါးကိုဖွင့်လိုက်လေသည်။ ကားထဲတွင် လူပျိုပေါက်အရွယ့် ရုပ်သန့်သန့် ကောင်လေးတစ်ယောက်ထိုင်လျက်ရှိသည်။
On 4:49 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay movies No comments
On 5:12 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay love story5comments
မျက်နာတစ်ခုလုံးသည် အခန်း၏အပူချိန်နှင့်ဆန့်ကျင်စွာ ပူနွေးလာသည်။ ထိုအပြင် နား ထဲသို့ဝင်ရောက်လာသော အသံသည် နားစည်ကိုဖြတ်၍ နှလုံးအိမ်အတွင်းသို့ရောက်လာသည်။ အစ်ကိုက ငွေမက်လို့ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာလေ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒဏ်တွေကိုသီးခံရမှာပေါ့ လိုဆိုတဲ့ စကားတွေ က ကျွန်တော် ဂုဏ်သိက္ခာကို များစွာထိခိုက်လေသည်။
အင်းပါညီ မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်။ ကိုယ်ကငွေကိုလိုအပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ မင်း ပြောတာတွေကို လက်ခံရတော့မှာပေါ့ကွာ။ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ဘဲ။ နောက်ရက်မှ ဆက်သင်တော့မယ်လို့ပြောပြီး ရေးလက်စစာအုပ်ကို သိမ်းလိုက်သည်။ နောက် ကျွန်တော်၏ တပည့် တစ်ယောက်လည်းဖြစ် ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း၏ညီလည်းဖြစ်သော သုတဇွဲကို နုတ်ဆက်၍ှ ပြန်ခဲ့သည်။ အခန်းအထွက်တွင် ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း ကောင်းဆက်နှင့်တွေတော့ အေးသားကြီးငါနေ မကောင်းလို့ ဒီနေ့ မင်းညီကို စေားစေားနာပေးလိုက်တယ်ကွာ။ နောက်ရက်မှ ထပ်သင်တာပေါ့ဟု ပြောတော့ ကောင်းဆက် ကအေးနားကွာမင်းမျက်နာလည်း မကောင်ဘူ နေမကောင်းတာမှဟုတ် ရဲ့လား တစ်ခြားအဆင်မပြေတာရှိလားဟုမေးလေသည်။
မရှိပါဘူး ဟုပြောပြီး ကောင်းဆက်တို့အိမ်မှပြန်ခဲ့သည်။ အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ဆိုင် ကယ်ကို မည့်သို့ပင်မောင်းပြီး ကျွန်တော်နေသော အိမ်လေးကိုရောက်လာသည်ပင်မသိ။စော်ကားခံ ရသောအရာသည် နလုံးသားတစ်ခုဖြစ်ပြီး မာနတရားအတွက်အစတေးခံလိုက်ရသော အရာသည် ပညာပင်ဖြစ်သည်။
On 9:50 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay life4comments
ပဏ္ဍုပ်ဟူသောစကားသည်ပဏ္ဍကဆိုတဲ့ ပါဠိက ဆင်းသက်လာသည်။ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ အခြောက်(ဂေး) ဟု ပြောကြသည်။ ပဏ္ဍုပ်များသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထပ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပဏ္ဍုပ်များသည် ဗုဒ္ဓဟောကြားသော ဝိနည်းတော်ဥပဒေတော်ကြီးတွင်လည်း အတိအလင်းပါဝင်ထားပါသေးသည်။ ပဏ္ဍုပ်ကိုတိုက်ရိုက်အနက်အဓိပ္ပါယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လိင်င်္အဂါချို့ယွင်းသူဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ပဏ္ဍုပ်တို့အားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးမှ အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်
Cappuccino (Gay Short)
On 7:48 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay movies No comments
Freunde (Gay Short)
On 9:51 PM by Myanmar Cute Gay Boy in gay movies No comments
ယောကျာ်းတွေအထူးသဖြင့် (ဂေး) တွေအတွက် HPVကာကွယ်ဆေး
On 9:48 PM by Myanmar Cute Gay Boy in gay life, ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ No comments
တနှစ်တနှစ် စအို-ကင်ဆာ လူနာပေါင်း အမေရိကားမှာ ၆ဝဝ ရှိပြီး၊ ၈ဝဝ နီးနီးသေဆုံးနေကြရတယ်။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်ဆေး HPV vaccine ဟာ (ဂေး) တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ စအို-ကင်ဆာကိုပါ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ သုတေသန တခုက ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ယောက်ျားတွေကို ဒီကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးထားရင် Human papillomavirus ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါဖြစ်မှာကို ၇၅% သက်သာစေတယ်လို့ The New England Journal of Medicine မှာ ရေးသားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထုတ်ဖေါ်ချက်ဟာ Centers for Disease Control and Prevention အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး နဲ့ ကာကွယ်ရေး ဗဟိုဌာနကနေ အသက် ၁၁-၁၂ နှစ်ရှိတဲ့ ယောက်ျားလေး မှန်သမျှ ဒီ HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဘို့ အကြံပြုအဖွဲ့ကနေ တိုက်တွန်းချက် ထွက်တဲ့နေ့ရဲ့ နောက်ရက်မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
သင့်ရဲ့ Male G-spot ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်း
On 9:35 PM by Myanmar Cute Gay Boy in gay life, ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ No comments
German gynecologist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ernst Gräfenberg က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ G-Spot လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် အပြည့်စုံကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါရဲ့။
The prostate in men has been unofficially called the male G-Spot because it can also be used as an erogenous zone. It is located where the rectum joins the colon, about 50 mm (2 in) from the anus, and when aroused it isawalnut-shaped swelling.
မြန်မာလို နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင်တော့ စအိုတွင်း မှာရှိနေတဲ့ ယောက်ကျား ကာမ-ခလုတ် ပေါ့ဗျာ။
On 8:14 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay movies No comments
Vocal - Han Htoo Zen
Lyrics - Phoo Phoo (Melody World)
Staring - Han Htoo Zen, Zwe Pyae (Zic Zak), Nant Chit Nadi Zaw
On 8:06 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay life No comments
“လောကအလှ” အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာက “လိင်တူချင်းတပ်မက်မှု”နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို မေးမြန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကို http://lawka-ahla.com/news.php?item.1167 မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါလေးကို သူ့စာမျက်နှာကပဲ ကူးယူပြီး ကျွန်တော့် ပရိသတ်အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ေေ်ိ်မေး ။အမျိုးသားတစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ လိင်တူချင်းကို နှစ်သက်တဲ့သူဆိုတာကို အသက်ငယ်စဉ်မှာ တင်သိနိုင်သလား ဆရာ။ အသက်ငယ်စဉ်မှာကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိနိုင်တာပဲ။ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်ကျမှ လိုင်းပြောင်းသွားတာမျိုးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
အတ္တကျော် ။ ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကလေးရပြီး၊ ကလေးတော်တော် အရွယ်ရောက်ပြီးမှ အဲဒီ့လိုင်းကို အပြီး ပြောင်းသွားပြီး သူ့ကိုယ်သူ စက်ဆုပ်နေသူရဲ့ လက်ရေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာရှိပါတယ်။ အလားတူ စာတွေလည်း ရှိနေတဲ့အပြင် တစ်နေ့က Burnet Institute မှာ Sexuality အကြောင်း ဟောပြောတော့ တက်ာတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲမှာ အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်ပြီးမှ သည်လိုတွေ လိုင်းပြောင်းကုန်ကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ငေါငေါကြီး တ
On 7:56 AM by Myanmar Cute Gay Boy in ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ No comments
၁။ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ
သည်ကိစ္စမျိုးကို သားလေး နားလည်အောင် အရပ်သုံးစကားနဲ့ တန်းခနဲ ချရေးလိုက်ချင်ပေမယ့် နားခံသာတဲ့ စကားလုံးကို ရွေးရတာကိုက အလုပ်ကြီး တစ်ခု ဖြစ်နေသေးတယ်။ အမှန်မှာတော့ သားရယ်၊ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာ ဖြေတယ်ဆိုတာ ငယ်ပါကို ကိုယ့်ဘာသာ လှုံ့ဆော်ပြီး သုက်ထွက်အောင် ဆောင်ရွက်တာကို ခေါ်တာပဲပေါ့။
အဲဒီ့ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေတဲ့ကိစ္စဟာ ရှက်စရာလိုလို၊ ရွံ့စရာလိုလို၊ အကုသိုလ်အမှုလိုလို အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်နေတတ်တယ် သားရဲ့။ ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ကွာ၊ ဒါ လူတိုင်းလိုလို၊ အထူးသဖြင့် ယောကျာ်း တိုင်း လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ သဘာဝတစ်ရပ်ပါပဲ သား။
ပါးစပ်ပါ၊ ဝမ်းပိုက်ပါတဲ့အတွက် အစာစားတယ်၊ ရေသောက်တယ်၊ နှာခေါင်းပါတဲ့အတွက် နံစော်တဲ့အနံ့ကို မလိုလားဘဲ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့ကို နှစ်ခြိုက်တယ်၊ နားရွက်ပါတော့ ဆူညံသံကို မခံနိုင်တတ်ကြဘဲ ငြိမ့်ငြောင်းတဲ့ အသံလေးတွေကို မက်မောတယ်၊ မျက်စိပါတော့ အနိဋ္ဌာရုံကို မကြည့်ချင်ဘဲ ဣဋ္ဌာရုံကိုမှ ရှုမြင် ခံစားချင်တယ်။ ဒါတွေဟာ လူ့ခန္ဓာမှာ ရှိနေတဲ့ ဒွါရ အသီးသီးရဲ့မောင်းနှင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေပါပဲ။ အလားတူပဲ၊ ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ် စွန့်တယ်ဆိုတာဟာလည်း ညစ်ပတ်သောအရာတွေလို့ အများက နားလည်လက်ခံထားကြပေမယ့် အသက်ရှင်နေတဲ့ လူမှန်သမျှ ရှောင်လွှဲ လို့ မရဘဲ ပြုရမြဲ လူ့ကိစ္စတွေပါပဲသား။ အေး… အဲသလိုပဲ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေတယ်ဆိုတာဟာလည်း လူမှန်သမျှ ရှောင်လွှဲလို့မရဘဲ ပြုကြမြဲ လူ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲကွာ။
On 6:47 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay movies No comments
WATER | VATTNET isashort coming-of-age film about family, loneliness
and sexual identity. It examines the confusing period of adolescence and
the first homosexual feelings ofayoung boy inarefreshing, open and
DOP: Winant Veldhuizen
On 6:41 AM by Myanmar Cute Gay Boy in gay life No comments
ဂေးလောကမှာပြောနေကြတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဂေးတွေဟာသစ္စာမရှိဘူးတဲ့....... ဟုတ်ပါတယ် ဒီစကားဟာဂေးလောကမှာအပြောများကြပါတယ်။ ဒီတော့ဂေးတွေဘာလို့ သစ္စာမရှိကြတာလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ ဂေးအချစ်ဟာ သဘာဝကြီးကိုဆန့်ကျင်ထားတဲ့ အချစ်မိုလို့ ဂေးတွေဟာသစ္စာမရှိတာလား.... ဒါမှမဟုတ် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက် ဥပမာ ကိုယ်ဝန်ရှိတာတို့ဘာတို့မရှိလို့ သစ္စာမရှိတာလား.... ဒါမှမဟုတ် ဂေးတွေရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုယ်က ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်ချင်ကြတာကြောင့် သစ္စာမရှိတာလား.....
MCGBသို့ ရသ​စာေ​ပေ​ဆာ​င်း​ပါးများေ​ပး​ပို့​လို​ပါ​က boytheboy.sept@gmail.com သို့ေ​ပး​ပို့​နိုင်ပါ​သ​ည်။ MCGB မှေ​ဆာ​င်း​ပါး​ရှ​င် များေ​ပး​ပို့ေ​သာ​စာ​မူများ​ကို website တွ​င်ေ​ဖာ်ြ​ပေ​ပး​မ​ည်ြ​ဖစ်သ​ည်။(မှတ်ချ​က်။ ။ MCGBသည်အ​ခ​မဲ့​ဆိုဒ်တစ်ခု​သာြ​ဖ​စ်ေ​သာြေ​ကာ​င့် စာ​မူေ​ပး​ပို့ေ​သာေ​ဆာ​င်း​ပါး​ရှင်များ​မည်သ​ည့်​အခေြ​ကးေ​ငွ​မှ ရ​ရှိ​မည်မ​ဟုတ်ပါြေ​ကာ​င်းေ​လး​နက်စွာ​အသိေ​ပး​ပါ​သည်ခင်ဗျား)(Site Admin)
(၁) ည​ကတိ​တ်​ဆိတ်ငြိမ်​သက်​လျှ​က်​ရှိ​သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်​တွင် မှောင်​မဲ​နေ​သော အရိပ်​အ​ယောင်​များ​မှ​လွဲ ၍​အခြား​သက်​ရှိ​ဟူ၍ ပျောက်​ခြင်...
Home (Thai Gay Short)
ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်အခြားကောင်လေးတစ်ယောက် (ဇာတ်သိမ်း ပိုင်း)
အခန်း(၆) အတန်ကြာသောသီဟအမှန်တကယ်ပင်အိပ်ပျော်သွားပါသည်။ ဘယ်တုန်းကအိပ်ချင်နေမှန်းမသိ သည့်သီဟ အခုသူ့ပေါင်ပေါ်မှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ...
(ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖတ်ချင်သူများအတွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပထမ ဆုံးရေးတာမိုလို့ ကောမန့်မပေးရင် ဆက်မရေးတော့ဘူးလို...
(၄) ဆရာမက စာသင်လို့ပြီးသွားသောအခါအခန်းထဲမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါသည်။ ကောင်းသန့် စားပွဲပေါ်ရှိသူ့စာအုပ်များကို လွယ်အိတ်ထဲသို့ပြန်ထည့်လို...
Other MyanmarLGBT Websites
MCGB website admin- boytheboy.sept@gmail.com
Copyright © Myanmar Cute Gay Boy (MCGB)